I-China Single Driving High Pressure Roller Mill - Ifektri ye-PGM yabaphakeli nabahlinzeki | Luhle
I-single Driving High Pressure Roller Mill - I-Series PGM
Isicelo: I-single Driving High Pressure Roller Mill - I-Series PGM yakhelwe ngokukhethekile ukugaya ama-clinkers kasimende, udoti wamaminerali, iziqeshana zensimbi njalonjalo emigudwini emincane, ukuchoboza kakhulu amaminerali anensimbi (ores yensimbi, ores manganese, ithusi ama-ores, i-lead-zinc ores, i-vanadium ores nezinye) nokugaya amaminerali angenawo insimbi (amalahle amalahle, feldspar, nepheline, dolomite, i-limestone, i-quartz, njll.) kufulawa.
1. Ukusebenza Ngokusebenza
Imayela elilodwa lokushayela eline-roller ephezulu lisebenza njengokuchoboza ngakunye kanye nokugaya nge-powling ngokuncipha kombhede womzimba. Kuma-rolling amabili, enye ilungisiwe, kanti enye iyasebenza. Zijikeleza ngokulingana futhi zinesivinini esilinganayo sokusebenza. Ngemuva kokuthi izinto zokwakha zingene zisuka ku-feeder ephezulu, zingadonswa phansi ukuze zicindezelwe ngaphansi kwengcindezi ephezulu phakathi kwabagibeli ababili, bese kuthi izinto ezinhle zixoshwe kusuka phansi.
2. Ukushayela Ingxenye
Le mishini idinga kuphela isethi eyodwa yokushayela imoto. I-roller engaguquki idlulisela amandla okushayela ku-roller esebenzayo ngohleloxhumano olunjenge-dentition, ukwenza ama-roller amabili asebenze ndawonye ngejubane elifanayo. Akukho ukungqubuzana okushelelayo, okungonga ngempumelelo amandla kagesi azungeze ama-45% kunegesi ejwayelekile ephezulu kakhulu.
3. Uhlelo Lokucindezela
Ukwamukela uhlelo oluhlanganisiwe lwentwasahlobo lwentwasahlobo, i-roller esebenzayo ingasebenza kalula, i-esp. lapho kungena ukungcola kwensimbi. Lolu hlelo lungaqinisekisa ama-95% esilinganiso sokusebenza. Ngenkathi, i-roller yendabuko yamukela ukubola ngokuthi uwoyela we-hydraulic ukhishwa epayipini, elifaka futhi lilimaze kalula indawo ye-roller kanye nohlelo lwamafutha we-hydraulic.
4. Isithasiselo seRoller
Bhangqa izinto zokuthambisa ezingagugi zokufaka i-welding ukuthola indawo eyi-roller ne-HRC 58-65. Ingcindezi ingashintshwa ngokwesilinganiso sezinto ezisetshenziswayo, ezingakwazi nje ukuqaphela ukucindezelwa nokugaya, kepha futhi nokuvikela umhlaba ongaphezulu. Akukho ukuhilizisana okushelelayo lapho i-roller ehleliwe isebenza ngokubambisana naleyo esebenzayo. Lapho-ke singakwazi ukuthi impilo yayo yenkonzo yinde kakhulu kuneyendabuko.
Izici Zobuchwepheshe Obukhulu
1. Ukusebenza Kokusebenza Okuphezulu
Uma kuqhathaniswa nemishini yokubhidliza yendabuko, umthamo wokucubungula ukhuphuka ngo-40 - 50%. Umthamo wokucubungula we-PGM1040 ungafinyelela cishe ku-50 -100 t / h, ngamandla we-90kw kuphela.
2. Ukusetshenziswa Okuphansi Kwamandla
Njengendlela eyodwa yokushayela yama-roller, idinga imoto eyodwa kuphela yokushayela. Ukusetshenziswa kwamandla kuphansi kakhulu. Uma kuqhathaniswa nesendlalelo sokugibela se-rolling ejwayelekile, kunganciphisa ukusetshenziswa kwamandla ngo-20 ~ 30%.
3. Ikhwalithi enhle yokulwa nokugqokwa
Ngokushayela imoto eyodwa kuphela, ukusebenza kokuvumelanisa kwama-rolling amabili kuhle kakhulu. Ngezindawo ezihlanganayo ze-welding, ama-rolling anekhwalithi enhle yokuvimbela futhi angagcinwa kalula.
4. Inani Eliphezulu Lokusebenza: ≥95%
Ngomklamo wesayensi, imishini ingacindezelwa yiqembu eliphakeme kakhulu lentwasahlobo. Ingcindezi yokusebenza ingalungiswa ngokuzenzakalela njengokucindezela kweqembu lasentwasahlobo. Alikho iphuzu lokungasebenzi.
5. Ukuzenzakalela okuphezulu nokulungiswa okulula. Ngaphandle kohlelo lwe-hydraulic, kunesilinganiso esiphansi sokungasebenzi kahle
6. Impilo ende Yenkonzo
7. Isakhiwo Esilula Esinamandla
Esedlule: Uchungechunge lwe-RCYB Ukumiswa Kwaphakade kwe-Magnetic Iron Separators
Olandelayo: Isistimu yokudlulisela ehlakaniphile ye-HRS-ray
Uchungechunge lwe-CTDM Multi - I-Magnet Pulsating Magnet ...
I-RCDZ2 Super evaporative Cooling Ukuzihlanza E ...
Isihlungi se-ZPG Disk Vuta
Uchungechunge lwe-CTF Powder Ore Dry Magnetic Separator
Uchungechunge lwe-Iron RCYB Ukumiswa Kwaphakade